Izithandani Zothando Ikhabethe Lokhuni 2 elineLake Views - I-Airbnb
Izithandani Zothando Ikhabethe Lokhuni 2 elineLake Views
Kodaikanal, TN, i-India
Ikamelo e-indlu eyakhiwe esihlahleni ibungazwe ngu-Aj
Izindlu zokhuni ze-Avantara Homestays zingamagumbi afakwe kahle abekwe phakathi kwezihlahla. Imizuzu nje ukusuka echibini, le ndawo eseceleni iyindawo yokuhlala yasemadolobheni njengezinye. I-Woodhouse inikeza indawo yokuhlala eseduze, elula, enokuthula yabantu abangu-2 abanombono we-panoramic wechibi kanye nesigodi saseShola. Siyakwamukela ukuthi uhlale
Ngezindawo zokuhlala kanye nokuhlala isikhathi eside ping us
Ukudla okuphekwe ekhaya kunikezwa ngoku-oda kusengaphambili
Amakhabethe okhuni anemvelo ye-eco - enomusa, ezolile futhi enethezekile.
Imaphakathi nenhliziyo ye-kodai, izindlu zezihlahla ziyigugu elifihliwe. Yini engaba ngcono kunokulala ubukele ichibi futhi uvuse izinyoni ezicula ngakuwe--konke ngaphakathi kwemingcele yedolobha?
Indlu yezinkuni iqukethe izindawo - Ingqondo Nomzimba - Izincazelo zezindawo ezi-2 zingezansi.
Ingqondo - I-Patio: enesitezi sakudala samapulangwe namareyili, iyindawo enhle yokufunda noma yokukhuluma futhi inovulandi obheke ihektare lezinkuni eziluhlaza kanye nechibi...
Umzimba - Igumbi Lokulala: Ukulala 2. Yini engaba ngcono kunombhede osezingeni eliphezulu endlini yokhuni? Umbhede ophindwe kabili onethezeke kakhulu ufakwe umatilasi kanokusho: Ifomu lememori neziphethu ze-ortho. Amalineni athokomele enziwe nge-300TC Linen noma ama-microfibres. Kusho ukuthi uzoba nokulala kwakho okuhle kakhulu ebusuku lapha eChalet! Yigumbi elibanzi elingu-300sqft elinekhabethe lezingubo, isibuko sokugqoka, Ifeni, Igedlela, izikhwama zetiye nesikhwama sekhofi, itafula lekhofi nokuhlala, izibani ezizungezile kanye nedeski lokutadisha. AYIKHO i-TV esithethelelayo yize sine-wifi
AmaBathroom axhunywe nezinto zokufakelwa zesimanje (ishawa, amanzi ashisayo, ukugeza izandla nokomisa izinwele) sihlinzeka ngamathawula angu-600 TC nezinsipho ezenziwe ngezandla.
Sicela udlule kuma-FAQ esigabeni esithi “Ezinye Izinto Okufanele Uziqaphele”
Ibekwe esigodini sechibi, indawo ihlanganisa okuhle kakhulu kwalokho okuhlinzekwa ngamagquma nokunethezeka nokunethezeka kwedolobha. Le ndawo yokuhlala ingeyabantu abafuna ukuthula nokuthula e-chalet eyingqayizivele nenhle .Uma usuka kule ndawo, uzoba nombono omangalisayo wechibi nesigodi.
Simema abathandi beqiniso bemvelo nabangakwazi ukuqonda ukuphila lapha ukuthi bahlale endaweni yethu. Zizwe ukhululekile ukuhlangana ukuze ukhulume nathi. Sihlala ngaphakathi kwekhampasi efanayo